Aza avela ho tany lavitra andriana ny Kaominina Ambanivohitr’i Solila - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tatamo il y a 2 mois
Solila, 100 Km any andrefan’i Fianarantsoa. Raha ho any, manaraka ny lalam-pirenena faha 45 (R.N 45). Eo amin’ny 25 Km tsy hahatongavana any Ikalamavony ny sampanan-dalana mitondra mankany. Tsy vita mora ny lalana. Raha atao ny kajy, 1km isan’ora ny hafainganam-pandeha. Maharitra 10 ora ny faharetan’ny dia miainga eto Fianarantsoa vao tonga any. Tena manimba fiara. Matetika tafandry an-dalana na mijanona ora maromaro ny mpandeha noho fahasimban’ny fiara. Raha misy fitaovana tsy maintsy hovidiana aty Fianarantsoa moa dia eo ny tranony.
Any amin’ny dezaka i Solila
Kaominina hadinon’ny mpitondra Fanjakana nifandimby, toy ny tanàna maro eto Madagasikara. Ny fiara matanjaka ihany no manao asa fitaterana any. Tsy misy afa tsy indray mandeha isan-kerinandro anefa izany. Mifatratra miaraka amin’ny entana ao anaty Kamiao ny mpandeha. Ny lalana efa simba vao mainka mihasimba hatrany noho ny vesatry ny fiara sy ny entana entiny. Misy fiara 4x4 iray mitondra mpandeha ihany koa, saingy matetika manary an-dalana, noho ny faharatsiany, ampian’ny faharatsian-dalana. Mandry an-dalana ny mpandeha matetika. Indraindray aza 2 andro no lany eny, indrindra amin’ny fotoam-pahavaratra. Raha misy dia maika tsy maintsy haleha dia tena sahirana. Misy maty eny an-dalana aza ny marary mafy mila fitsaboana haingana aty Fianarantsoa.
Ankoatra ny lalana, saika ahitana fahasimbana avokoa ny fotodrafitrasam-panjakana any Solila. Sahirana ny dokotera sy ny marary fa tsy misy kidoro sy rano azo ampiasaina intsony ao amin’ny hopitaly. Potika ny C.E.G, zara raha misy dabilio ampiasaina. Mbola tsy resy lahatra amin’ny fampianaran-janaka koa ny ankamaroan’ny olona. Miraviravy tanana ny mpampianatra. Malaina ny mpianatra hamonjy sekoly. Eo amin’ny 100 eo ho eo sisa ny mpianatra 6è ka hatramin’ny 3è ao amin’ny C.E.G. Tsy tonga hatrany amin’ny kilasy 3è ny ankamaroany. Ny ray aman-dreny izay mba resy lahatra amin’ny fampianaran-janaka, mampiditra ny zanany ao amin-dry masera. Hatramin’ny kilasy fahafito ihany anefa no misy ao. Izay manana fahafahana, mandefa ny zanany afaka C.E.P any Fianarantsoa na amin’ny toerana hafa. Variana amin’ny fitadiavan-karena ny mponina. Faritra be omby rahateo moa ny any ka maro no tsy resy lahatra amin’ny maha zava-dehibe ny fampianaran-janaka. “Aleonay ny zanakay ampianarina bizina toy izay mandany vola amin’ny ekolazy”, hoy ny ray aman-dreny sasany. Hafaliana ho azy ny fanapahan-kevitry ny zanany tsy hianatra intsony. Maro araka izany no mitsoaka an-daharana. Ao amin’ny sekolin-dry masera amin’izao fotoana izao, 6 sisa ny mpianatra ao amin’ny kilasy 7è.
Kaominina mamokatra i Solila. Hita ao avokoa ny vary, katsaka, tsaramaso, voanjo ary ny mangahazo. Noho ny faharatsian’ny lalana anefa, amidy mora ny vokatra. Ny mpanangom-bokatra no tena mahazo tombony. Ny sasany amin’izy ireo aza voatonontonona fa manakana ny tetikasa fanamboaran-dalana satria te hanjakazaka amin’ny fangoronan-karena. Betsaka koa ny tetikasam-panjakana efa henoheno fa hatao any an-toerana saingy manjavona, mandamoaka. Etsy ankilany mbola mahazo laka ny tsy fahaiza-mitantana. Mivarotra mora amin’ny asotry. Avy eo mividy lafo amin’ny fotoam-pahavaratra. Rahoviana no ho resy ny ady politika ao amin’ity Kaominina ambanivohitra ity? Toa politika feno fitiavan-tena mantsy no manjaka. Hadino tanteraka ilay vahoaka nilokalokana tamin’ny fampielezan-kevitra. Izy ireny anefa no andriamanjaka ka mila olo-marina sy tia tanindrazana hitondra ny tananany mankany amin’ny fampandrosoana sy fampivoarana.